फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
माघ ०४, २०७४ 403
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको भन्दै बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा दुई–दुई रुपैयाँ बढाएको हो । परिवर्तित मूल्यसूची बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाएअनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको उनले बताए । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल एक लिटरलाई १०३ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको एक लिटरको मूल्य समान ८१–८१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि गत १७ पुसमा पनि निगमले इन्धनमा मूल्य वृद्धि गरेको थियो ।
निगमका अनुसार मूल्य समायोजनपछि पनि डिजेलमा घाटा नै रहेको छ । अझै २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पाक्षिक घाटा हुने निगमले जनाएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ । हाल एलपी ग्यासको प्रतिसिलिन्डर मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ छ । ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय ८ रुपैयाँ ३० पैसा नोक्सान छ । ग्यासबाट मात्रै २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ ।
भारतमा साढे तीन वर्षयताकै उच्च
नेपालमा इन्धन निर्यात गरिरहेको भारतमा पनि यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । भारतमा बुधबार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ७१ रुपैयाँ ३९ पैसा भारु पुगेको छ । त्यस्तै, डिजेलको मूल्य ६२ रुपैयाँ ६ पैसा भारु पुगेको छ । भारतमा कायम भएको बुधबारको मूल्यसूचीअनुसार डिजेलले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । पेट्रोल भने साढे तीन वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आएपछि भारतले दैनिक मूल्य समायोजन गर्न थालेको छ । भारतले मूल्य समायोजन गरेर पठाउन थालेपछि नेपालले पनि १५–१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ ।